Cash Deposit Machine लाई संक्षेपमा CDM पनि भनिन्छ । नेपालीमा यसलाई निक्षेपमा मेशिन भनिन्छ । मेशिन मा cash लगेर राखेपछि बैंक मा निक्षेपकर्ता उपस्थित हुनु पर्दैन । केवल आफ्नो खाता नम्बर हाने पश्चात ग्राहक (खातावाला) को नाम, थर देखिन्छ । खातावालाको पहिचान भए पश्चात सोहि मेशिनको एकापट्टी रकम राख्ने भाडो हुन्छ त्यसमा रकम राखेर Ok Button थिचे पश्चात नोट मेशिनले तान्छ र एउटा स्लीप दिन्छ । यसमा Deposit रकम र नोटको विवरण दिन्छ ।
1 जग्गाको वर्गिकरण
2 झमकलाई लैनसिंह बाङ्देल पुरस्कार
3 EVDO सेवा
4 Climate Change Development Portal के हो ?
5 UNO का अंगहरु
6 Career News and Info श्रावण १०, २०७४
7 सम्माननीय को ?
8 स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र
9 Career News and Info भाद्र २२, २०७४
10 Career News and Info चैत्र २७, २०७३